Xagee laga daawan karaa Formula 1 oo bilaash ah sanadka 2021 | Androidsis
Maaddaama jinsiyadaha Formula 1 aan hadda laga sii dayn lacag la'aan, isticmaaleyaal badan ayaa raadinaya ikhtiyaarrada bilaashka ah si aad u aragto Foomka 1, si raaxo leh guryahooda, adigoon u baahnayn inaad aado baarar, qamaar aasaasid ... Haddii aad rabto inaad ogaato haddii ay jirto qaab lagu sameeyo, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
Intii lagu jiray 2021, wakiillada Isbaanishka ku hadla waxay ka kooban yihiin Fernando Alonso (Alpine - Renault) oo ku soo laabtay Formula 1 ka dib markii uu ku guuleystay labo horyaal, Carlos Sainz (Ferrari) iyo Mexico Serio Pérez - Checo (Red Bull - Honda). Hadaad rabto inaad ogaato sida loo daawado F1 2021, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1.1 Sida loo daawado F1 2021 taleefanka gacanta oo leh DAZN
3 F1 TV Pro iyo F1 TV Helitaanka
3.1 Sida loogu daawado F1 2021 mobilada F1 TV Pro
4 RTVE dib baa loo dhigay
5 Ka eeg F1 saxanka dayax gacmeedka
6 Ka daawo F1 adoo adeegsanaya IPTV
6.1 Raadi liistada IPTV
6.2 Caqli xumo
8 Dhageyso Qaaciddada 1
9 F1 ee Xaqiiqda Virtual
10 Adeegyada aan sii shaqeynayn si ay u daawadaan Foormula 1
Xuquuqda baahinta ee Formula 1 ee 2021 iyo wixii ka dambeeya ayaa hoos u dhacday sanadkan DAZN, oo ah madal isboorti oo fiidiyoow ah, oo dad badani ugu yeeraan Ciyaaraha Netflix.
In kastoo ma aha madal kaliya ee bixisa, haddii ay tahay tan ugu badan ee lagu taliyay adoo na siinaya, marka lagu daro, tiro badan oo ah heerarka isboorti ee heerka koowaad oo laga heli karo qalab kasta, ha ahaato telefishan, kombuyuutar, kiniin, moobiil ...
Mufasiriintu waxay la mid yihiin Movistar + F1, oo ah barxada ay ku wadaagaan xuquuqda (sanadkii hore waxay ahaayeen kuwo gaar u ah bartaan) waana leenahay Antonio Lobathaye Cristobal Rosaleny oo ay weheliso Nira Juanco oo qayb ka ahayd shaqaalaha faallooyinka markii Antena 3 ay xuquuq ku lahayd Spain.
Marka lagu daro Formula 1, sidoo kale wuxuu leeyahay xuquuqda Moto GP, sidaa darteed haddii aad jeceshahay isboortiga gawaarida, kaliya 99,99 euro sanadkii ama 9,99 euro bishii, waxaad ku raaxeysan kartaa labada isboorti marka lagu daro tennis, kubbadda koleyga, tartamada kubbadda cagta (Copa del Rey, Premier League…) Moto2, Moto 3, WTA, Eurosport 1 iyo 2…
Haddii aadan weli isku dayin madal, waxaad ku sameyn kartaa gabi ahaanba bilaash 1 bilood, sidaa darteed waa fursad aad u fiican in si ka duwan loo arko F1 2021, maaddaama dhammaan baahinta, sida kuwii hore, laga heli karo barxadda.
Sida loo daawado F1 2021 taleefanka gacanta oo leh DAZN
Sida aan kor uga faallay, si ka duwan Movistar F1, DAZN waxay na siisaa, adeeg fidin wanaagsan oo qiime leh, codsi aan ku raaxeysan karno dhammaan waxyaabaha laga heli karo barxadda, ha noolaato ama ha dib u dhigto, aaladda moobilkeenna, ha ahaato casriga ama kaniiniga.
Barnaamijka DAZN ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash oo waxay u baahan tahay rukhsad lacag bixin ah si ay u awoodaan inay adeegsadaan barxadda.
Haddii aad sidoo kale haysatid iPhone ama iPad, waad awoodi kartaa ka soo dejiso arjiga DAZN xiriiriyehan.
Sanadihii la soo dhaafay, si loogu raaxeysto Foomka 1aad ee Isbaanishka, dadka isticmaala ku qasbay inay maraan giraanta Movistar, yaa lahaa xaquuqda gaarka ah, inkasta oo ay shirkaddu qiimo aad u badan ku fadhido, kharash aan waligiis la qorin.
Nasiib wanaagse, sannadkan, gaar ahaanta Spain ayaa loo gudbiyay barnaamijka 'DAZN', si kastaba ha noqotee, Movistar wuxuu sii wadaa inuu bixiyo labada nooc ee Formula 1 iyo Moto GP, Kanaallada DAZN 1 (wac 59) iyo DAZN (wac 60).
Haddii mid ka mid ah sababaha kalifaya ee ah in la haysto Movistar uu ahaa Formula 1, waad sii wadi kartaa inaad sidaa yeelatid dhibaato la'aan, taasi waa, dhammaan waxyaabaha ay baahinayso Waa isku mid oo aan ka heli karno DAZN, oo lagu daray raaxada ay barnaamijkani na siiso marka aan dooneyno inaan ka baxno diiwaangelinta markaan rabno.
F1 TV Pro iyo F1 TV Helitaanka
Milkiilaha xuquuqda F1 adduunka oo dhan wuxuu ku jiraa gacanta Warbaahinta Liberty. Shirkadani waxay diyaar u tahay dhammaan isticmaaleyaasha laba hab oo loo raaco jinsiyada waqtiga dhabta ah: F1 TV Pro iyo F1 TV Helitaanka.
Halka kan ugu horeeya uu inaga siinayo helitaanka calaamadda tooska ah dhammaanteed xogta la xiriirta shaqada, Ikhtiyaarka labaad wuxuu na siinayaa kaliya macluumaadka ku saabsan tartanka, maahan sawirada.
Si ka duwan barnaamijyada kale, F1 TV Pro laguma heli karo barnaamijka TV-ga casriga ah, laakiin waxaa lagu heli karaa oo keliya marin biraawsar. Haddii waddankaaga Formula 1 aan laga heli karin DAZN, tani waa ikhtiyaarka lacag-bixinta ugu fiican ee la heli karo.
Sida loogu daawado F1 2021 mobilada F1 TV Pro
Ahaanshaha milkiilaha rasmiga ah ee xuquuqda adduunka oo dhan ee Formula 1, sida la filayo, waxaan sidoo kale awood u leenahay inaan ku raaxeysano F1 taleefanka casriga ah ama kaniini meel kasta oo aan ku joogno codsigeeda rasmiga ah, codsi ah, sida DAZN, waxay ubaahantahay rukumasho.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa arjiga loogu talagalay Apple TV, iPhone iyo iPad sidoo kale loogu talagalay Dabka Amazon Fire TV Stick, qalab sanadkii iyo Chromecast.
Thanks to barnaamijka F1 TV, waxaan haysanaa helitaanka nool F1, F2, F3 iyo Porsche Supercup tartamada, marka lagu daro telemetry-ka dhabta ah, tartanka iyo taariikhda darawalnimada, ku celiska, daqiiqadaha ugu fiican, kala soocida tooska ah ...
RTVE dib baa loo dhigay
Kahor Foomka 1aad wuxuu noqday ganacsi dhaqaajiya balaayiin yuuro sanad walba, waan ku raaxeysan karnaa iyadoo loo marayo telefishanka dadweynaha ee Isbaanishka.
Inkasta oo hadda sida kaliya ee loogu raaxeysto F1 ay tahay iyadoo la hubiyo, waxay u badan tahay in, sidii sanadihii hore, Catalan Grand Prix, oo la qabto 9-ka Maajo, haddii laga heli karo Teledeporte, haa, daahday
Ka eeg F1 saxanka dayax gacmeedka
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo a saxanka satalaytka agtiisa kan aqbala kanaalka sii daayay banaanka. Kaliya laakiin waa in inta badan kanaallada lagu sii daayo luqado kale, marka laga reebo kanaalka ABC ee Puerto Rico.
Xitaa sidaas oo ay tahay, sida sawirradu muhiim u yihiin, haddii aad haysato saxan dayax gacmeed iyo kanariyaha wax lagu qaabilo ka dibna waxaan ku tuseynaa liis dhammaan marinnada ku jira Foormula 1 waxay ku baahiyaan meel furan oo bilaash ah oo sharci ah.
Isbaanish Isbaanish ah ABC Puerto Rico
Inglés Shabakad Toban Australia
Inglés Channel 4 UK fekradeed
Inglés ABC Mareykanka
Azerbaijan Idman TV Azerbaijan
Mandarin Chinese CCTV-5 Shiinaha
Kantonnada Ciyaaraha Guangdong Shiinaha
Croatian SPTV Croacia
Faransiis MBC Beershiya Iran
Faransiis Irib Varzesh Iran
Carabi / Beershiyaan MBC Bariga Dhexe
Ruso TV la wadaago la fahmay
Ka daawo F1 adoo adeegsanaya IPTV
Qaaciddada 1-aad waxay noqotay adeeg lacag lagu bixiyo inta badan waddamada, si kastaba ha noqotee maahan dhamaantood. Tusaale ahaan Boqortooyada Midowday (UK), dhammaan tartamada F1 waxaa lagu sii daayaa si hawo ah, marka waa inaad daartaa TV-ga si aad ugu raaxeysato adigoon bixin hal euro.
Haddii aadan awoodin ama aadan rabin inaad lacag ku bixiso Formula 1, xal fudud oo bilaash ah ayaa ah iyada oo loo marayo liiska IPTV oo leh codsiyo ay ka mid yihiin VLC, Kodi ... Waxaan dhibaatada ka heli karnaa markay tahay helitaanka liisaska kanaallada Ingiriisiga ah ee IPTV, laakiin haddii aan xoogaa raadino, ma aha wax aad u adag in la helo.
Liisaskan, waxaan sidoo kale ku heli karnaa marinno u baahan rukumis si loo helo adeeggan, liisaska xaaladaha badankood xor ma ahan iyo in intaa lagu daro, ma dammaanad qaadayaan wakhti kasta inay shaqeyn doonaan dhibaato la'aan.
Raadi liistada IPTV
In kasta oo inta badan IPTV ay liis garaynayso oo aan ka heli karno internetka ku siin karaan marinnada dadweynaha, waxaan sidoo kale heli karnaa marin loo maro kanaallada lacag bixinta. Laga soo bilaabo Androisis, ma taageereyno liiska noocan ah.
Haddii aad rabto inaad raadiso liiska IPTV si aad u aragto baahinta kanaallada si toos ah u baahiya (qaybtii hore waxaan kaaga tagay liiska) Foomka 1, waa inaad kaliya Raadi Google «Liisaska IPTV» ama «liiska IPTV», si natiijooyin loogu helo luqado kale.
Wiseplay waa mid ka mid ah codsiyada ugu da'da weyn suuqa gala liiska IPTV. Si kastaba ha noqotee, sanadihii la soo dhaafay, qaabkeeda ganacsigu wuu is beddelay si loo hirgeliyo muusigyo warbaahin ah oo ciyaara nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka wada socdaan biraawsarka webka, laakiin wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagu daawanayo liistada IPTV
Codsiga kuma jiraan noocyo liis ah, sidaa darteed waa inaan u baahanahay internetka si aan u raadino liiska liiska halka ay ku yaalliin kanaallada ay ku socoto baahinta Formula 1, inta badan hawada furan, in kasta oo aan sidoo kale ka heli karno liisaska halka laga helayo Movistar F1, oo lacag la’aan ah
In kasta oo ay run tahay in Dukaanka Play-ka aan ku haysanno codsiyo aad u tiro badan oo aan ku daawan karno kanaallada qaabkan, Wiseplay waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, haddii uusan ahayn kan ugu fiican. Waa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash Oo waxaa ku jira xayeysiis, xayeysiis aan ka saari karno adoo sameysanaya ab-ku iibsiga abid abid.
Codsi kale oo xiiso leh fiiri kanaalka IPTV Waa iyada oo loo marayo codsiga IPTV, codsi aan u soo dejisan karno bilaash, waxaa ku jira xayeysiis laakiin, sida codsi kasta oo noocan ah oo doonaya inuu ku jiro Play Store, kuma jiraan noocyo liisas ah.
Photocall.tv waa bog noo ogolaanaya inaan ka dhex marinno biraawsar, kumbuyuutar ama qalab mobile, illaa kumanaan kanaal oo hawada-bilaash-ka ah oo adduunka oo dhan ka socda, sidaa darteed waa beddel xiiso leh dhammaan kuwa aan haysan saxan dayax gacmeed ay ku dhex galaan laamiyada waddamada u dhow ee F1 hawada looga sii daayo.
Laga soo bilaabo Photocall.tv, waxaan marin u leenahay ABC, kanaal si toos ah u tabiya F1 oo toos ugu nool Mareykanka, Kanaalka 4 ee faafiya Formula 1 oo si bilaash ah looga sii daayo Boqortooyada Ingiriiska iyo Ireland.
Tayada qulqulka waa mid aad u wanaagsan, tan iyo ma aha wax kale oo aan ahayn calaamadaha ka imanaya shabakadda telefishanka kaas oo aan toos uga heli karno degelkiisa.
Boggan sidoo kale wuxuu na siiyaa marin u helitaanka kumanaan idaacadood adduunka oo dhan, sidaa darteed sidoo kale waa ikhtiyaar haddii aan dooneyno inaan kaliya raacno tartanka anaga oo aan arkin.
Dhageyso Qaaciddada 1
In kasta oo raadiyaha uu yahay habka ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto isboorti kasta, inta aynaan qaab kale gacanta ku haynama waa ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo, ugu yaraan haddii aan dooneyno in nalagu wargeliyo mar walba oo tartanka ah.
Maanta, way adagtahay in la helo taleefan casri ah oo leh raadiyaha FM-ka, hase yeeshee, muhiim maahan haddii aan adeegsanno barnaamijyada mid kasta oo ka mid ah idaacadaha hadda tabiya jinsiyadaha sida: Cadena SER, Onda Cero, Cadena COPE iyo Radio Marca.
F1 ee Xaqiiqda Virtual
Xaqiiqadaas dhabta ahi waa mustaqbalka, cid diidi kartaa ma jirto in kastoo, xilligan la joogo, weli wuxuu hayaa waddo dheer oo uu maro. Xal aad u xiiso badan oo loogu raaxeysto F1 qaab gebi ahaanba ka duwan ayaa laga helayaa Riyada VR madal Isbaanish ah oo kuu oggolaaneysa inaad ku raaxeysato tartamada F1 sida haddii aan halkaas joogno.
Riyada VR waxay bixisaa helitaanka fiidiyowyada 360-ka ah iyada oo loo marayo muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah ee wax soo saare kasta, taas oo noo ogolaaneysa inaan isku dhex galno tartamada, ku dhex socono paddock, dabaaldegyada ka dhacaya podium, shabakadda bilowga ...
Adeegyada aan sii shaqeynayn si ay u daawadaan Foormula 1
Bishii Janaayo 2021, websaydhka iyo barnaamijka Android laftiisa ayaa joojiyay shaqadii gebi ahaanba. Tan iyo taariikhdaas, arjiga gabi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn, markaa ha ku dhicin jahwareerka ah inaad ka raadiso degel (bogga rasmiga ah wuu xiran yahay) maxaa yeelay waxa kaliya ee aad awoodi doonto inaad ka hesho ayaa ah virus, trojan, malware ama wax lamid ah oo ku dhaca aaladdaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Halkee laga daawan karaa Formula 1 oo bilaash ah sanadka 2021
9-ka codsi ee ugufiican ee lagu shukaansado xaas